Sajhasabal.com |आजपनि घट्यो सुनको मूल्य, कति छ ? हेर्नुहोस्
मौसममा बदली, मेघ गर्जनसहित पानी पर्ने
विप्लवका जिल्ला इञ्चार्ज नवलपरासीबाट पक्राउ
आजपनि घट्यो सुनको मूल्य, कति छ ? हेर्नुहोस्
असार २८, काठमाडौं । साताको पाँचौ दिन बिहिबार पनि नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ ।
बुधवार प्रतितोला ५७ हजार ६०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको मूल्य आज घटेर ५७ हजार २ सयमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।
त्यस्तै बुधवार प्रतितोला ५७ हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भएको तेजावी सुन पनि घटेर आज प्रतितोला ५६ हजार ९ सयमा कारोबार भइरहेको छ।
त्यस्तै चाँदी प्रतितोला पाँच रुपैयाँले घटेर ७५५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।